ကာဇန်မြို့ - ဝီကီပီးဒီးယား
ကာဇန်မြို့(ရုရှား: Каза́нь; IPA: [kɐˈzanʲ]; တမ်းပလိတ်:Lang-tt)သည် ရုရှားနိုင်ငံ၊ တာတာစတန်ရီပါ့ပလစ်၏ မြို့တော်ဖြစ်ပြီး အကြီးဆုံးမြို့လည်းဖြစ်ကာ လူဦးရေ ၁,၁၄၃,၅၃၅ ဦး နေထိုင်ကြသဖြင့် ရုရှားနိုင်ငံ၏ ဆဌမမြောက် လူဦးရေအထူထပ်ဆုံးမြို့လည်းဖြစ်သည်။ ကာဇန်မြို့သည် ဗော်ဂါမြစ်နှင့် ကာဇန်ကာမြစ်တို့ပေါင်းဆုံရာတွင် တည်ထားသော မြို့ဖြစ်ပြီး ရုရှားနိုင်ငံ၏ ဥရောပရုရှားဘက်အပိုင်းတွင် တည်ရှိသည်။ ကာဇန်ကရင်မလင်သည် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာအဖြစ် ထိန်းသိမ်းထားရာ နန်းတော်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Tatarstan၏ မြေပုံကို ပြသရန်
ကိုဩဒိနိတ်: 55°47′47″N 49°06′32″E﻿ / ﻿55.79639°N 49.10889°E﻿ / 55.79639; 49.10889ကိုဩဒိနိတ်: 55°47′47″N 49°06′32″E﻿ / ﻿55.79639°N 49.10889°E﻿ / 55.79639; 49.10889
၄၂၅.၃ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၁၆၄.၂ စတုရန်းမိုင်)
၆၀ မီတာ (၂၀၀ ပေ)
• ခန့်မှန်း (2016)
၂၀၀၉ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် Russian Patent Office သည် ကာဇန်မြို့အား ရုရှားနိုင်ငံ၏ "တတိယမြောက်မြို့တော်"ဟုသော အမည်နာမကို မြို့တော်၏ အမှတ်လက္ခဏာအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သော အခွင့်အာဏာကို ပေးအပ်ခဲ့သည်။ ထို ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်ပင် ကာဇန်မြို့အား "ရုရှားနိုင်ငံ၏ အားကစားမြို့တော်"အဖြစ် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။ ကာဇန်မြို့သည် အိမ်ရှင်အဖြစ် 2013 Summer Universiade၊ 2014 World Fencing Championships၊ the 2015 World Aquatics Championships တို့ကို အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ ဖီဖာ ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းဖလားနှင့် ၂၀၁၈ ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလားတို့တွင်လည်း ပြိုင်ပွဲလက်ခံကျင်းပရာ အိမ်ရှင်မြို့ထဲမှ တစ်ခုအဖြစ် ပါဝင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ကာဇန်မြို့သို့ ခရီးသွားဧည့်သည် ၂.၁ မီလီယံ လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်နှင့်နှိုင်းစာလျှင် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းမျှ တိုးတက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကာဇန်ကရင်မလင်သို့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ခရီးသွား ၁.၅ မီလီယံမျှ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ထိုပြင် မြို့တော်၏ ဟိုတယ်လည်းဖြစ် ရေဥယျာဉ်ကဲ့သို့ ဖျော်ဖြေရေးအဆောင်အဦများပါသော "Kazan Riviera" တွင် ၁ မီလီယံမျှသော ခရီးသွားတို့ လာရောက်ခဲ့ကြသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ Order #01-02/9
↑ Шаймиев, Минтимер Шарипович (10 September 1999). "Выступления Президента РТ М. Шаймиева, мэра г.Казани К.Исхакова и президента АН РТ, академика М.Хасанова на торжественном собрании по случаю установления даты основания г.Казани" (in ru). Гасырлар авазы/Эхо веков (3/4). Retrieved on 17 July 2011.
↑ Official website of Kazan. Kazan City Duma (ရုရှား)
↑ ၄.၀ ၄.၁ Official website of the Mayor of Kazan (ရုရှား)
↑ Численность населения муниципальных образований Республики Татарстан
↑ Welcome to the Republic of Tatarstan
↑ ၉.၀ ၉.၁ Law #46-ZRT
↑ Kazan Russia —athousand-year Russian city
↑ Current local time in Kazan
↑  Archived December 8, 2009, at the Wayback Machine.
↑ Kazan officially becomes Russia's Third Capital။ Pravda (2009-04-03)။ ၂၀၁၈-၀၃-၂၅ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Komsomolskaya Pravda: Kazan - sports capital of Russia 14.12.2009
↑ List of Best Tatars။ Mytopdozen.com။ ၂၀၁၈-၀၃-၂၅ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 2,1 млн. туристов посетили Казань в 2015 году | www.tatar-inform.ru။ tatar-inform.ru။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကာဇန်မြို့&oldid=459463" မှ ရယူရန်